Nagarik News - साइको हत्यारा
अनुहार सुन्दर। बोल्न सिपालु। हेर्दा एकदम भलाद्मी। कुनै पनि कोणबाट खतरनाक नदेखिने अभिषेकराज सिंह निर्दयी 'सिरियल किलर' हुन्। उनले छ जनाको ज्यान लिएको कबुल गरिसकेका छन्। प्रहरीले 'मास्टरमाइन्ड', 'डेन्जरस' र 'चार्ल्स शोभराज टाइपको' भनेको छ उनलाई। यी भयानक अपराधीबारे सजना बरालले संकलन गरेको विवरणः
'ऊ त मास्टरमाइन्ड अपराधी हो, असाध्यै डेन्जरस छ।'
हालै पक्राउमा परेका शृङखलाबद्ध हत्याका अभियुक्त अभिषेकराज सिंहबारे महानगरीय प्रहरी अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रहरी नायब उपरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीले दिएको प्रतिक्रिया हो यो।
नेपालगञ्ज, वडा नम्बर ३ का स्थायी बासिन्दा हुन् अभिषेक। उनी ३२ वर्षका भए। मध्यमवर्गीय परिवारका एक्लो छोरा अभिषेकले भारतस्थित रुपेडिहाको क्याम्पसबाट आइए पास गरेका छन्। पढाइमा तेज थिए उनी। कसैको 'अन्डर'मा बस्न नरुचाउने, निष्पि्कक्री, निडर र महत्वाकांक्षी स्वभावका छन्। 'ऊ संकुचित र एकोहोरो पनि छ,' घटना अनुसन्धान टोलीका प्रमुखसमेत रहेका डीएसपी चतुर्वेदीले भने, 'एक्लै बस्न रुचाउँदैन। आफ्नो कुरा सुन्दिने वा उसको प्रशंसा गर्दिने मान्छे राख्छ वरिपरि।'
पढाइका लागि भारत जाँदा उनले सिक्किमको गंगोत्रीस्थित पतञ्जलि योग शिविरबाट योग सिकेका थिए। पाण्डित्याइँ र तन्त्रमन्त्रमा समेत उनी दख्खल राख्छन्। अर्थोपार्जनका लागि उनले सुरुमा महायज्ञ, होम, पुराणलगायत धार्मिक कार्यक्रम आयोजना गर्थे। उनको दिनचर्या राम्रै चलेको थियो त्यो बेला।
अभिषेकका बाबु अजयराज सिंह खेलकुद परिषद्को बाँकेस्थित शाखा अधिकृत थिए। कुरा विसं २०६२ भदौ ८ गतेको हो। तत्कालीन नेकपा माओवादीका दुई कार्यकर्ताले अजयराजलाई राजावादी भएको आरोपमा हत्या गरेको अभिषेकको ठहर छ। 'बुवाको हत्या भएपछि मेरो दिमाग खलबलियोेे,' उनले प्रहरीलाई यस्तो बयान दिएका छन्, 'आमाको विचलित अवस्था देख्दा झनै टेन्सन हुन्थ्यो।' तनावले उनलाई डिप्रेसनमा पुर्या यो। त्यही बेलादेखि उनले डिप्रेसनको औषधि खान सुरु गरेको थिए। 'भन्न त डिप्रेसनको दबाइमात्रै खान्थेँ भन्छ,' चतुर्वेदीले भने, 'तर, उसले अरू लागुऔषधि पनि प्रयोग गरेको हुनुपर्छ। त्यसैले त कुन ड्रग्स कति बेरसम्म खायो भने मान्छे लट्ठिन्छ? कति खायो भने ओभरडोज हुन्छ? उसलाई पूरै जानकारी छ।'
डिप्रेसनमा गएपछि अभिषेकले हत्याको बदला हत्याले नै लिने निधो गरे। शक्तिशाली भइएन भने दुःख पाइन्छ, संसार शक्तिशाली मान्छेकै हातमा छ भन्ने भान परेको थियो उनलाई। अन्ततः उनले बाँके खजुरासीका १७/१८ वर्षका दुई युवकलाई गोली हानी हत्या गरे। प्रहरी भन्छन्, 'सुरुमा उसले प्रतिशोधका कारण र आफ्नो शक्ति प्रर्दशन गर्न आपराधिक क्रियाकलापमा हात हालेको थियो। पछि, हत्या गर्ने बानी नै पर्योश।'
पहिलो पटक अपराध गर्दा अभिषेक निकै आत्तिएका थिए। उनले ज्यान लिएको कुरा प्रहरीसम्म पुगेपछि डराएर भारततिर भागेका थिए। 'अब फसिने भइयो भन्ने डरले म आफ्नो धन्दापानी छोडेर इन्डिया भागेको थिएँ,' चतुर्वेदीले उनको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, 'तर, द्वन्दकाल भएकाले यहाँ त्यतिबिघ्न खोजतलास भएन। म बचेँ।'
भारत गएपछि अभिषेकको आपराधिक मनोबल थप बढेको प्रहरीहरू बताउँछन्। त्यहाँ पनि उनी आपराधिक गिरोहकै संगत र संरक्षणमा रहे। 'सानोतिनो बदमासी त त्यहाँ पनि गरेकै हुँ,' उनले प्रहरीसँग भनेका छन्, 'त्यहाँको स्थानीय पत्रिकामा छापिएको समेत थिएँ, अपराधीका रूपमा।' अभिषेकले 'सानोतिनो' भने पनि भारतीय अपराधीसँग मिलेर ठूलै विध्वंस गरेको हुुनुपर्ने प्रहरीको अनुमान छ। 'एकै ठाउँमा टिकिरहन नसक्ने स्वभाव भएकाले ऊ चाँडै पक्राउमा परेन,' चतुर्वेदीले भने, 'कुनै पनि ठाउँमा दुई घण्टाभन्दा बढी समय बिताउँदैन। यत्तिको चलायमान भइयो भने प्रहरीले आफूलाई समात्न सक्दैन भन्ने विश्वास थियो उसलाई।'
पत्रपत्रिकामा नाम आउन थालेपछि उनी बसिरहेको ठाउँबाट भागेर भारतको अयोध्या पुगेका थिए। 'अलिअलि विरक्तिएको थिएँ त्यो बेला,' उनी प्रहरीसँग भन्छन् रे, 'कस्तो मान्छे कस्तो भएँ भनेर चिन्ता लाग्थ्यो।' अयोध्या गएपछि उनी अघोरी बाबाको शरणमा परेका थिए। केही महिना मसानघाटमै बसेर अघोरीहरूसँग कालाजादु र तन्त्रमन्त्र सिकेको उनी बताउँछन्। लाशको मासु खाने, लाशसँग सम्भोग गर्नेजस्ता हर्कत आफूले गरेको उनले प्रहरीलाई बताएका छन्। 'अघोरीसँगको संगतपछि ऊ बिहारको औरंगावादस्थित अम्झार सरिफतिर लाग्यो,' चतुर्वेदीले भने, 'त्यहाँ उसले आफू मुस्लिम भएको भन्दै आश्रय लियो र मुस्लिम विद्या सिक्यो। नवाज र कुरानका मन्त्र फरर भन्छ। अरबिक भाषाको राम्रो ज्ञान छ उसलाई। त्यहाँ उसको नाम रहमान हलुवाई थियो।'
केही समयको बिहार बसाइपछि अभिषेक नेपाल फर्किए। कीर्तिपुरस्थित चोभारमा घर भाडामा लिएर बस्न थाले। विसं २०६४ सालतिरको कुरा हो यो। अभिषेकले योग सिकाउने, झारफुक र तन्त्रमन्त्रको धन्दा सुरु गरे। त्यसताका उनी देव शर्माको नामले चिनिन्थे। उनले आफ्नो असली नाम, थर, ठेगाना भएका सम्पूर्ण कागजपत्र र प्रमाणपत्र खरानी पारिसकेका थिए। देव शर्मा त्यो बेला चर्चित योग गुरु र तान्त्रिक मानिन्थे। 'देव गुरुले नै हाम्रो रोग निको पारेका हुन् भन्ने मानिसहरू अझै पनि छन्,' डीएसपी चतुर्वेदी भन्छन्, 'अस्ति भर्खर दुई जना महिला हाम्रो कार्यालयमै आएर 'देव गुरुले त हाम्रो बे्रन ट्युमरसमेत ठीक पारिदिएका थिए, उनी अपराधी होइनन् होला' भन्दै थिए। उसले मान्छेलाई यसरी फसाउँछ कि ऊ झुटो बोल्दैछ वा नाटक गर्दैछ भन्ने अलिकति पनि भान पर्दैन मान्छेलाई। पानीलाई दूध नै हो भनेर साबित गरिदिनसक्ने वाक्कला छ उसमा। उसको व्यक्तित्व, जिउडाल र अनुहारले पनि मान्छेलाई झुक्याउँछ। ऊ निकै भलाद्मी पाराको, ह्यान्डसम र आकर्षक मान्छे छ।'
योग र तन्त्रमन्त्रबाट राम्रै आम्दानी गर्दै थिए अभिषेक। मान्छेलाई थाङ्नामा सुताउन सिपालु थिए। हुँदै नभएको रोग लागेको छ भन्दै उनले कतिपयलाई उपचारका लागि भारत लग्ने, मोटो रकम असुल्ने र देखावटी टि्रटमेन्ट गरेर सञ्चो भएको भन्दै नेपाल फर्काउने गर्थे। कतिलाई भने उनले निको हुने दबाइ भन्दै बेहोस हुने औषधि खुवाई तिनका गरगहना र पैसा लुटेर भागेका थिए। उनले बुटवलमा छँदा अस्टे्रलिया पठाइदिने भन्दै एक दर्जनभन्दा बढी युवालाई ठगेका थिए। जग्गा तथा अन्य अवैध कारोबारमा पनि उनी संलग्न रहँदै आएका थिए। आफ्नै सासुको समेत सात लाख रुपैयाँ खाइदिएका थिए।
विसं २०६७ मा अभिषेकको भेट मदनविक्रम राणासँग भयो। धनाढ्य परिवारका राणा रोगी थिए। उनी देव शर्मा भनिने अभिषेककहाँ योग सिक्न आएका थिए। राणाले आफ्नो जग्गा बेच्न आँटेको कुरो अभिषेकलाई थाहा दिए। अभिषेकले इचंगुनारायणका निरप भनिने २७ वर्षे नरबहादुर गोतामेसँग सम्पर्क गर्न सल्लाह दिए। म्युजिक भिडियोमा अभिनयसमेत गरेका गोतामे जग्गाको कारोबार गर्थे। गोतामेसँग मिलेर आधा सेयर खाने दाउ थियो अभिषेकको। तर, जग्गामा किचलो आएपछि गोतामेले अभिषेकलाई बाइपास गरी सबै कमिसन आफैँ कुम्ल्याउने निर्णय गरेको अभिषेकको आरोप छ। 'मलाई धोका दिन खोजेकाले मैले उसलाई मारेको हुँ,' उनले बयानमा भनेका छन्।
म्युजिक भिडियोमा खेलाइदिन्छु भन्दै अभिषेकले दीपेन्द्र भन्ने साथीसँग मिलेर गोतामेलाई पोखरा, नेपालगञ्ज हुँदै सुर्खेत लगेका थिए। झाडापखालाका बिरामी गोतामेलाई उनीहरूले वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, वडा नं ६ स्थित आशीर्वाद होटलको कोठा नं २०२ मा लगी पाँच वटा डाइजिपाम र चार वटा नाइट्रोभेट इन्जेक्सन दिई बाहिरबाट चुकुल लगाएर हिँडेका थिए। 'होटल साहूलाई 'हाम्रो साथी बिरामी छ, हामी एकछिन घुमेर आउँछौँ' भनी दुवैजना त्यहाँबाट भागेका थिए,' डीएसपी उमा चतुर्वेदीले भने, 'राति अबेरसम्म पनि केटाहरू नफर्किएपछि बिरामी भएको कोठा उघारेर हेर्दा गोतामे सिकिस्त अवस्थामा भेटिए। साहूले गोतामेलाई माया नर्सिङ होममा भर्ना गराइदिएका थिए। उनको भोलिपल्ट बिहान निधन भएको थियो।' अभिषेकले होटलमा राज केसीको नाउँमा कोठा बुक गरेका थिए।
गोतामेलाई 'सल्टाए'पछि अभिषेक बर्दिया हुँदै भारतको लखनउ भागेका थिए। उनीविरुद्ध गोतामे परिवारले त्यतिबेला नै किटानी जाहेर गरे पनि हत्यारा पक्रिन नसकेको प्रहरीको भनाइ छ। 'उसलाई फेला पार्न मुश्किल थियो,' चतुर्वेदी भन्छन्, 'घण्टाघण्टामा मोबाइल–सिम फेर्ने, छिनका छिनमै हुलिया परिवर्तन गर्ने, कसैसँग लामो समय दोस्ती नगर्ने प्रवृत्तिको थियो ऊ। बैंक, सरकारी कार्यालय, संघसंस्था कतै पनि उसका नाउँमा केही रेकर्ड पाइँदैन।' उनकी श्रीमती एलिसा सिजापती र छ महिनाकी छोरी ललितपुर सैँबु–१ स्थित रिलायबल कोलोनीको घरमा बस्थे।
'मुम्बईमा पनि फ्ल्याट किनेको छ भन्ने सुनिन्छ,' चतुर्वेदीले शुक्रवारसँग भने, 'ऊसँग कम्तीमा तीनटा कार जहिले पनि स्ट्यान्डबाई हुन्थे। एउटा गाडी आफै हाँक्ने र बाँकीमा ड्राइभर राख्ने गर्थ्यो। उसले समिर घिमिरेको नाममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट झुटो विवरण पेश गरी नागरिकता बनाएको छ।' घिमिरे थरका एक नागरिकलाई दुई लाख रुपैयाँ दिएर बाबु बनाई उनकै नाउँबाट नागरिता निकालेका छन् उनले। राहदानी र यातायात व्यवस्था कार्यालय, नारायणीबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र पनि किर्ते गरी निकालेछन्। उनले फेसबुक, ट्वीटर वा इमेल एकाउन्ट खोलेका छैनन्। योग गुरु भएर त्यत्रो सभासमारोह सञ्चालन गरे पनि गेटटुगेदरका फोटामा कतै पनि उनी भेटिँदैनन्।
अभिषेकले २०६९ साउन ७ गते बुद्ध भनिने जगतसिंह तामाङको हत्या गरेका थिए। उनले मिलन लिम्बूसँग मिलेर जगतलाई भारतको सिलिगुढी हुँदै लखनउ लगेका थिए। तिनैजना जगतको बा ८ च ३२३६ नं को वेगनआर ब्रान्डको कारमा सवार थिए। दिनभरि लखनउमा घुमघाम गरी बारावंकी र फैजावादको बीचमा रहेको होटल हाइवेमा आराम गर्ने बहानामा अभिषेकले जगतलाई २५ एमजीको टि्रप्टिन नामक डिप्रेसनको औषधि दूधमा मिलाई खान दिएका थिए। जगत बेहोस भएपछि उनलाई गाडीमा हालेर पुनः ३ थान इन्जेक्सन दिई राति साढे ९ बजे फैजावादको बाटोमा फालिदिएका थिए। आर्थिक कारोबार र व्यक्तिगत रिसइबीको कारण जगतको हत्या गरेको अभिषेकले बताएका छन्।
'आफ्नो बाटोमा अवरोध सिर्जना गर्ने र आफूलाई धोका दिन खोज्ने मान्छेलाई देखिसहँदैन,' चतुर्वेदी भन्छन्, 'धनको प्रलोभन भए पनि विशुद्ध पैसाका लागि वा बदलाभावले मात्रै उसले हत्या गरेको होइन। मान्छे मार्दा आनन्द आउने बानी परिसकेको थियो उसलाई।' उनी आफ्नो टार्गेटलाई ललाई–फकाई लागुऔषध ख्वाएर इन्जेक्सन दिई मार्ने गर्थे। यस्तो विधि कमै हत्याराले अपनाउने प्रहरीको अनुभव छ। एउटै विधि अपनाएर तीनभन्दा बढी हत्या गरेकाले उनलाई सिरियल किलर भन्न सकिने प्रहरी बताउँछन्।
'सामान्यतया घाँटी थिचेर, विष पिलाएर वा गोली हानेर मान्छे मार्छन् अपराधीहरू,' चतुर्वेदी भन्छन्, 'उसले ड्रग्स ओभरडोज गराएर मारेको छ।' भिसेरा टेस्टमा त्यसरी मारेका कुरा पत्ता नलाग्ने भएकाले उनले त्यो चलाखी अपनाएको हुन सक्ने अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरीको भनाइ छ। अभिषेक हेर्दा जति निर्दोष देखिन्छन्, उनी त्यति नै कठोर, निदर्यी र चतुर भएको प्रहरीले बताए। गाडीमा लाश बोकेर रातभरि हाइवेमा हिँड्न सक्थे उनी।
अभिषेकका थुप्रै केटी साथी थिए। तिनलाई उनी आफ्नो उद्देश्यपूर्तिका लागि प्रयोग गर्थे। 'केटीहरूसँग मोजमस्ती गर्ने स्वाभाव छैन उसको,' जानकारहरू भन्छन्, 'तर, केटीहरूलाई फकाएर, प्रेममा पारेर पैसा असुल्ने गर्थ्याे।' उनले प्रेमिका बनाएकी सोहनी राजभण्डारीलाई एउटा घर र गाडी बेच्न लगाई डेढ करोढभन्दा बढी रकम ठगेका थिए। गम्भीर रोग लागेर भारतको मेदान्त अस्पतालमा उपचार गराइरहेका सोहनीकी श्रीमान्लाई निको हुने पानी भन्दै उनले दुई लिटर पानी एक लाख भारतीय रुपैयाँमा बेचेका थिए। आफूलाई तान्त्रिकको बिल्ला भिराएर धेरैलाई छक्याएका थिए उनले।
आफ्नै घरमा काम गर्ने सार्की तामाङलाई पनि अभिषेकले आफ्नो पुरानै विधिअनुरूप लट्ठ्याउने औषधि दिई इन्जेक्सन लगाएर मारेका थिए। आफ्ना गोप्य सूचना लिक गर्न सक्ने भएकाले सार्कीलाई सुन्धाराको न्यू आकाश गेस्टहाउसमा लगेर मारेको उनले बताएका छन्।
'यसपालि दुई मिनेट ढिलो गर्नाले समातिएको हुँ म,' प्रहरीले हातमा हत्कडी भिराउँदा उनले भनेका थिए रे, 'म जेल परुञ्जेल योग सिकाउने व्यवस्था मिलाइदिनू।' मिडियासामु सार्वजनिक गर्दा पनि उनी निडर देखिन्थे। प्रहरी कार्यलयमै उनलाई फाँसी दिन माग गर्दै पीडितहरूले नारा लगाइरहँदा पनि उनको अनुहारमा पश्चात्तापको भाव देखिएको थिएन। 'यो देशको सिस्टम सबैलाई थाहा छँदैछ,' अभियुक्त अभिषेकको भनाइ उद्धृत गर्दै थिए डीएसपी चर्तुवेदी, 'मैले धेरै दिन जेल बस्नुपर्दैन।'
हाल अभिषेक जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा पठाइएका छन्। पेप्सीकोलाका ३२ वर्षीय निरनजंग पाण्डेलाई नागमणि खोज्न जाने बहानामा हेटौँडाको खोप्लाङ लैजाने क्रममा उनले असोज ८ गते हत्या गरेका थिए। हत्याको अघिल्लो दिन अभिषेक र उनका सालो पर्ने प्रभाकर नरसिंह राणाले पाण्डेलाई होटल सोल्टीमा बोलाई नागमणिबारे बताएका थिए। नागमणिको खोजीमा हिँडेका पाण्डेको शव धनुषा, बेँगाडावर ८ लालगढस्थित महेन्द्र राजमार्गनजिक फेला परेको थियो। सोही हत्या अभियोयमा उनलाई हाल धनुषा पठाइएको महाशाखाले जनाएको छ।
'उसले हामीसँग जे जति कुरा गर्योा, ती सबै कुरा अदालतमा बोल्छ जस्तो लाग्दैन,' चतुर्वेदीको आशंका छ, 'यसले सम्पूर्ण हत्या जानाजान र योजनाबद्ध ढंगले गरेको हो। हत्याका छ वटा घटना स्विकारिसकेको छ। अरू पनि हत्या, ठगी वा अपराध गरेको हुनुपर्छ। हामी अनुसन्धान र सोधपुछ गर्दैछौँ। उसलाई कडा कारबाही हुन्छ।'
मानवीय संवेदना नै छैन उनीसँग
सानै छँदा बुबाको हत्या हुनु र त्यसपछि आमाको अवस्था दयनीय हुनुले अभिषेकको व्यक्तित्व विकासमा असर गरे। उनलाई नियम, कानुनको पर्वाह हुन छाड्यो। नियम तोड्नुमै रमाइलो मान्न थाले उनले। गलत काम गर्दा ठूलो काम गरेको महसुस हुन थाल्यो उनलाई। जसरी उनका बाबुलाई मारिएको थियो, त्यसरी नै उनी अरूलाई मार्न चाहन्थे। बिस्तारै उनले दुःख, पीडा भन्ने चिज बिर्संदै गए। उनले मानवीय भावनालाई नै बुझ्न छोडे। मनोवैज्ञानिक भाषामा यसलाई 'एन्टिसोसियल पर्सनालिटी डिस्अर्डर' भनिन्छ। यो उपचारबाट निको हुन नसक्ने रोग हो। यो रोग लागेका मान्छे निडर र एकोहोरो स्वभावका हुन्छन्। उनीहरूलाई आफू गल्ती गर्दैछु, गलत बाटोमा लागेको छु भन्ने विश्वास हुँदैन। त्यस्ता व्यक्तिमा दुःख, पीडा आदि सहन सक्ने क्षमता अत्यधिक हुन्छ। अभिषेक सिंहको मामिलामा पनि यस्तै भएको हो। उनीसँग मानवीय समवेदना भन्ने चिजै छैन। ढुंगाजस्तो कठोर भइसकेका छन् उनी। पहिलो पटक हत्या गरेकै बेला उनी समातिएका भए उनको मनोबल बढ्ने थिएन।
डा. रवि शाक्य, मनोचिकित्सक
कला हो सेक्स
भनिरहनु नपर्ला– सेक्स दुई देहको मिलनमात्र होइन, दुई मनको मिलन पनि हो। यो यस्तो कला हो, जसले जीवनलाई हरिलोभरिलो र रसिलो बनाउँछ। तर, यौनसम्बन्धी सामान्य जानकारीको अभाव र यससम्बन्धी भ्रमले...
भित्री खेल : बेथितिको भुंग्रोमा खेलकुद
सरकारले निर्वाचित नेपाल क्रिकेट संघ पुनर्गठन गरेपछि नेपाली खेलकुदमा फेरि एकपटक विधिको शासन मिचिएको छ।
दिवंगत नेता ह्युगो चाभेजको देश भेनेजुएलाले पश्चिमी जगतले तेस्रो विश्वमाथि लाद्न खोज्दै आएको प्रभुत्व र वैरभावको जमेर विरोध गर्ने गरेको छ। अमेरिकाविरोधी क्रान्तिकारी छवि बनाएको यो देशले अर्को छवि पनि...